Gadzira Polygon zvichibva pamabheringi uye madaro mune yeExcel tafura - Geofumadas
Gunyana, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Downloads, Microstation-Bentley, topografia
Ngationei kuti chinangwa chii:
Ndine data rekuyambuka nemabhere uye madaro, uye ini ndoda kuivaka muAutoCAD kana Microstation. Isu takamboona iyo AutoCAD Iine chimiro chayo kudyisa iyi mhando yedata pasi pe fomati @dist <Uchiri muMicrostation zvaitwa kuburikidza neAcucuDraw.
Zvakanaka, mukupindura shamwari yedu James, heino tafura:
1 Dhiyabhorosi yenyaya
Izvi zvakapinda pasi pezhizha dzenhizha, pano iwe unopinda mafirimu, kure uye kuenda semuenzaniso.
2 The first coordinate
Izvi zviri mumusoro wenzvimbo yegreen, tichifungidzira kuti tinoziva kurongeka kwepfungwa yekutanga. Kana iwe usinayo, isa chero kukosha, zvirinani zvakakwirira kuitira kuti zvisungo zvisina kunaka zvisaoneke, senge zviuru zvishanu (zviuru zvishanu)
3 Izvo zvinobudisa data
Iyi ndiyo nzvimbo inowanikwa mumarandanisi, pane zvaunazvo iyo x uye y inoratidzirwa zvakagadziriswa nekuparadzanisa komma.
4 Nzira yekuitumira nayo kuCotCAD.
Zvakareruka, "kopi" inoitwa munzvimbo yeorenji yeiyo yakanakisa faira, uye muAutoCAD iyo polyline (pline) rairo inogoneswa uye "kunama" kunoitwa mubara rekuraira. Mhedzisiro yacho kuyambuka kwakakweverwa kungopa poindi yekuvhara
Pano unogona kutora template kuti ivakire mapurogoni zvichienderana nemirayiridzo uye mararamiro muTexcel tafura.
Inoda mupiro wekufananidzira wekuburitsa, waunogona kuita nawo Kadhi kadikiti kana Paypal.
5 Nzira yekuitumira nayo kuSyststation
Kuti ndiite mu Microstation Ndasarudza template inenge inenge chinhu chimwe chete, asi mune pfungwa ye Microstation Key-in command.
Ona template yeMicrostation.
Previous Post«Previous Pinda dheta nemabheji uye mahara mu Microstation
Next Post Kutarisana Nezvezvinyorwa zvepamusoro ne Microstation GeographicsNext »
58 Inopindura ku "Gadzira Polygon zvichibva pamabheyari uye madaro mune tafura yeExcel"
nyorera mupepeti pa geofumadas dot com
kuitira kuti vakupe rutsigiro
Ndine dambudziko. Pandakawana iyo template zvese zvakashanda mushe, izvo zvaive zvakaita semakore mana kana mashanu apfuura,
Ndakaishandisa pasina matambudziko. Parizvino hazvishande kwandiri pandinozvinamatira muAutocad. Ndakaedza mu Autocad 2013 uye 2017 uye hapana. Ini handizive kana ndichifanirwa kuona nekugona, ndiri kushandisa 2019. Kare ndaishandisa 2016.
Tarisa mail yako, kunyange zvisingadiwi, pane inouya url download.
Tanga waita mupiro, Ndingadhonza sei faira?
Zvadaro iwe uchafanirwa kuzviita ne Paypal.
Anstacio Montoya inoti:
Mhoro masikati machena ini handina kugona kuendesa nekuda kwekushaikwa kero yekambani yekuisa kwaziso
El article link inoratidza kubhadhara kushandiswa nebhadha,
Ini ndakanga ndisina kuzvigonesa. Kana ikasaoneka, shandisa F5 kuti itonhore.
hello husiku hwakanaka sekubhadhara kuburikidza nekutsvaga kana ndikazviita zvakananga mubhangi kune nhamba yekambani yandinoisa ini ndinovonga ndine shungu dzinofadza
Chengetedza mail yako, dzimwe nguva inopera.
Iwe unofanirwa kuwana mharidzo nekudhonza url, iyo inopera mumazuva e4.
Kana une matambudziko anotiudza mutori (at) geofumadas.com
Alex Mor inoti:
Ndakaita chikwereti ichibhadhara paypal. Ndekupi kwandinokwanisa kutora template?
Eduardo Henriquez inoti:
Ndaida kukuudza kuti utumire mari nePay Pal muzita rako kweExcel template
Arturo Salinas inoti:
Zvakanaka kwazvo, kuvaka muCGGIS cogo inoshandiswa
Iwe unofanira kushandisa concatenation mu Excel, asi uchishandisa Place Line.
Zvadaro unoisa pasi mufaira re txt uye uchitumidze neKinini
Muchikamu chino, tinotsanangura kuti sei.
Mangwanani akanaka kune vose uye kukwazisa nokuda kwebasa iri rakanaka.
Ndinoita sei muMICROSTATION kuitira kuti ndirege kungosiya nzvimbo yegore asiwo mitsetse iyo inogona kuumba polygonal?
Excellent yako yakanakisa sheet !! Iwe wakaponeswa!
Mune imwe imwe nyaya ndakabudisa imwe nzira yekuzviita nayo ne Microstation, uchishandisa concatenation mu Excel uye kwete txt file
Pane anoziva here kuti angapinda sei data iyo kamwechete?
Ichokwadi, inogona kushanda chero purogiramu inogamuchira kurongeka mune iyo mafomu.
Zvichida kune zvikwata zveArgGIS, asi handina kumbobvira ndataura nezvehurukuro iyi pano.
Save, iwe wakangoponesa hupenyu hwangu nehutu, ndakada kuita polygonal muArgGIS saka ndakashandisa nzira iyi uye ini ndakangoigadzirisa kuArmMap, Handizivi kana pane nzira iri nyore yekuita purogiramu iyi kana dai mave makabudisa zvimwe post pamusoro peizvi, asi hey akandibatsira zvakanyanya, zvingava zvakanaka kana vakaisawo chinyorwa kuti vachiise kuArgGIS. Pakupedzisira, thank you very !!! kukwazisa pamusoro peji ino, hellooooos.
Kune rubatsiro, ikozvino kana polygon yasara… ^ _ ^
Kuti iwe uchinje muWindows
Tanga, chengetedza panhizha, nzvimbo
Zvino ipapo, iwe sarudza iyo nyika kwauri uye neizvi iwe unofanirwa kuve nemakona akakodzera uye makesi munzvimbo yegrey, pazasi pane iyo mienzaniso iripi. Kutanga kune idzo nhamba.
Kana dzikaita sedzisina kumira zvakanaka ipapo, dzichiri kusarudza nyika yako, saka chengetedza bhatani re "kugadzirisa" uye ipapo shandura chimiro chechiratidzo chegumi uye zviuru zvekuparadzanisa chiratidzo.
Ndine dambudziko rekutora mu autocad, chinetso chemarara mune zvinotevera.
Dambudziko iri patafura Exel hofisi yangu I kuziva sei kuchinja koma (,) nokuti nguva (.) I 2007 hofisi.
Zvinoratidzika kwandiri munzira inotevera:
apo painofanira kuva nenguva (.) kune comma (,) tibatsireiwo ndapota !!
Gumiguru, 2010 pa
Mhoro munhu wese, ini ndine makore akati wandei ekushandisa MicroStation ye cadastre uye ndangoda kuwedzera kune yakanakisa mipiro yevavanoshanda navo kuti kana vachida kuwedzera polygon kuwedzera kune iyo mapoinzi, maitiro acho ari nyore kwazvo. Muhedhiyo txt pepa tinonyora "isa smartline", kune imwe neimwe kurongeka tinowedzera xy = x kuronga, y kurongana. zvichingodaro kune vese. Mune Key-in yekupinda tinonyora @C: \_ zita uye nzvimbo yefaira.txt Ndiyo fungidziro yemaitiro kana mumwe munhu achiziva chimwe chiitiko angatenda kuisirwa.
Zvakanaka hazvo, iyo odhiyo ndeye X-Y
francisco hernandez barron inoti:
Ndinofanira kuita urongwa mu autocad .. nokuti ini ndinopinda nharaunda uye x uye ndinowana ndege iri kupfura
Ndinokutendai hama nokuda kwekubatsira, ndinochengetedza basa rakawanda neetafura iyi, kufara kwekuvandudzwa kwemaitiro, basa rakanaka chaizvo ..
Juan Luis Córdova inoti:
Handina kuwana v8i
Ndechipi chinyorwa chaunacho?
V8 kana V8i
Zvakadini, ini ndatova nenzvimbo ye microstation, ini handizivi kana iwe unogona kundibatsira nenzira iyi uye edza zvishoma asi ine zvigadzirwa zvakawanda.
Akaropafadzwa mukomana anotarisa nzvimbo ye microstation uye mukomana anotendera
Kugadzira tafura yemafambisi uye nzvimbo dzakasara dzinotora Microstation Site, sokunge iwe haugone kuzviita chete neAccCAD asi Vashandi vehurumende.
Asi iwe unogona kuita tsanangudzo yekutsvaga kwemashoko aya neetafura iyi yakanakisisa
Zvakanaka Ndinoona zvichifadza, sezvo iwe kugadzirisa, ndine handigoni kuwana bhokisi kuvaka (mabheyaringi uye madaro) ane polygonal uye realizadaen MicroStation v8 xm kana v8i dambudziko, sezvo zvinoitwa Civilcad chete tebas ari mudziyo polygon uye kupa generating bhokisi kuvaka uye pikes ari mufananidzo kana pligonal, agredecira navo kundibatsira
Svondo, 2009 pa
Handina kumboona lisp iyo inoita izvozvo, iyo inogona kukubatsira ichi ndicho . Iyo kodhi haina password, saka unoishandura kuti ikupe iyo imwe ruzivo, kana iwe unoisiya mucherechedzo ikholamu ine concatenated basa.
Ndinokutendai, asi ndinofunga kuti ndinoda kujekesa chimwe chinhu, ndinoda kudzivisa kuzviita nemaoko, izvo zvinoshandiswa kushandisa Lips, kuti ndinyore data inotumira faira yakakurumbira.
Zvakanaka, ndinonzwisisa kuti kana iri iyo mutsara, iwe chete unoti:
- Raira mutsara
uye ipapo unoisa dhidhiyo pamakumbo semashoko.
I kundomukwazisa imi kana mupiro Q Das SO PEJI IYI INTERERESANTE. ZVAKANAKA vaida kuziva kana ndingamubatsira graphed IDZI Data IN Excel AUTOCAD, ME Tara mutsetse WITH ALL INFORMATION ID, Coordinates TOP OF THE KUKOSHA, Length, Azimuth uye Chido (INCL) kubva xy ndege.
MUBATSIRO WENYAYA UYE UCHOKWADI.
ID KUPENYU DZEMAHARA KUSVIRWA URI. »« AZIMUT »« INCL. »
Ing. Hugo Alarcón inoti:
Ini ndinokukorokotedza iwe, iri rakanakisa peji uye pamusoro pezvose neruzivo rwakanyanya ruzivo kune avo vedu vakazvipira kune ino topography uye geodey ...
Ndanga ndichitarisawo ruzivo rwauinarwo maererano nekushandiswa kwenzvimbo (kana gedesics) uye UTM ... ndiri kunetseka zvishoma nekushandurwa kweGeographies kuenda kuTopographic, ndiko kuti, ndinoda kutendeuka kubva ku geodeics kuenda kune flat system, nenzira yekuti iwo mapoinzi kana maveti isu takaisa uye takaita post-maitiro, tinogona kuishandisa neiyo yakazara chiteshi kana chero yakajairwa michina uye madaro cheki kana kuenderana ... ako makomendi angave anobatsira kwazvo ... ndatenda nekwaziso kubva ku tampico, tamaulipas, mexico ...
uye urongwa huri mune geographic or utm?
Shamwari dzakanaka ndaida kuziva kana iwe unogona kundibatsira sezvo ini ndinokwanisa kushandisa manyorerwe kubva kune gps kuenda ku autocad
Kana izvozvo zvaive zvakadaro, zvichida zvingava kuongorora mu control panel, locale, uye kuona kana mavhavha akafanana nezviparadzanisa zvezviuru uye decimal decimal.
unoziva ini ndinofunga kuti dambudziko riripo mukugadziriswa kwemakoma uye nguva…. kubva pakugona
ahhhhhhhh peji rakanaka huh ...
ok ndatenda, zvese zvakadzikama….
wanga uchitaura chokwadi iko kukanganisa paunenge uchiteedzera iyo data zvisirizvo ... zviuru zvekutenda ...
Zvakanaka chengeta urongwa hwezvauri kuita:
Point command (kana mutsara)
Iwe unosarudza nzvimbo yacho iri nani
Dzvanya pamutsetse weAutoCADC
Ini ndakanga ndisina kukanganisa kurova data chairo, chimwe chinhu chirikuitika, ah ndine imwe fomati mumhando yepamusoro iyo inobatsira kwazvo kugadzira maumbirwo mumapotifomu yakafanana neiyi fomati asi muzvinhu zvese izvi ndinowana iri meseji »2d point kana sarudzo keyword inodikanwa» kana uchipfuura uchienda kudzimba dzenyika, handisi kunzwisisa?.
Kana iwe uchida kupasa fomati mune zvakanakira ingo nyora yako email….
AAA KANA UCHIWANA MHINDURO PENYAYA IYI, Paridza shoko….
Ndine imwe fomati yakafanana neiyi, ndeyekugadzirisa migwagwa uye kuenda ku autodesk land.Iyo yakafanana chaizvo neiyi fomati, ini ndakatoshandisa fomati yandinayo uye yakandishandira zvakanaka uye ipapo ndakawana iwo meseji "2d poindi kana sarudzo kiyi kiyi inodikanwa" uye yangu polygon haina kuoneka, uye ini handina kukanganisa mukukopa iyo data. KANA UCHIDA KUKUPA FILEI MUZVINHU, Nyorera EMAIL YAKO ……
AAA NDINOKUMBIRA KANA WAKAWANA WAKAWANA MHINDURO, PASISA IZWI, HANDI KUZIVA KANA DAMBUDZIKO IYO YEMAHARA CAD KUSIMBISA KANA KUTI CHIMWE CHINOKUNDIKANA MUZVIMBO….
Joshua, ndinotenda kuti uri kunyora nzvimbo isina kururama, unofanira kukopa izvo zvakanyorwa mumarangi
2d poindi kana sarudzo kiyi kiyi inodikanwa inoonekwawo kwandiri uye handisi kuwana mhinduro kana uchizviziva, ndokumbirawo undibatsire, zviri kukurumidza, ndapota …….
Faira rakanakisa richandishandira zvakanyanya uye ini ndiri kuzobvunza zvandaibvunza nezve maitiro ekushandura zvikamu zvemuchinjikwa uye huwandu kusvika kuUTM…. Ini ndichaiyedza kuti ivhure nzira
Izvo zvinokwanisika kuti iwe une iyo comma uye dot fomati zvisizvo, izvi zvinofanirwa kuve zvakasimbiswa mupaneru wekutonga, marongerwo emudunhu. Izvo zvinoshanda kana iwe uine iyo mapoinzi sekuparadzanisa kwezvimedu uye makesi sekuparadzaniswa kwezviuru.
Ndakaedza muAustocad 2009 uye yakashanda zvakanaka asi microstation kwete
Zvichava kuti ini handiiti chinhu chakanaka mune imwe Microstation V8 xm.
1 Pearlline murairo
2 unonyora 0,0
4 kopi mumuganhu werineni wepamusoro pepaiti
5 tora pamutsetse wemirairo
6 paste kana ctrl + v
7 Shandisai maziso ekuzorora
Kana zvisiri kushanda, chimwe chinhu chinotenderedza chiri kutenderera. Imwe sarudzo inogona kunge ichikanganisa ndeyako misi uye nguva dzinovhiringidzwa muzvikamu zvekuparadzanisa zviuru nezviuru.
CHII CHINOFANIRA ICHI NDINOFANIRA KUENDA ZVIRI MUKATI COORDINATES KUAUCTOCAD.
PANDINOTAURA KUTI VANZVIDZE IYO NDINOTEURA VANONESA POLILINE WRITE 0,0 NDINONZWA NDINOGONESA DZINOGONA KUTI VANOTSVIRA Pfungwa DZINOSHUMA IZVI [Arc / Halfwidth / Kureba / Kusimudza / Width
Uye ini ndinogadzira KURE OMISO IZVO UYE ZVINYANYA ASI ZVINOGONA KUTI IZVI (2D poindi kana sarudzo kiyi inodikanwa), handizivi kuti ndoita sei kugadzira POLYGON STOP NDINODA KUTI MUZIVA KANA UNOGONA KUTI URI kundibatsira.
René, nhaurirano yacho inouya nokuti tatofunga nezvekugadzirisa kwekutanga.
RENE FABRICIO CASTRO inoti:
Ndinofunga kuti kubva kune izvozvi mazano hatigoni kuwana utm inogadzirisa nokuti iyo mirayiridzo haisi nzvimbo inogadzirisa. mupiro mukuru mukuparadzanisa nharo ne comma
En Iyi chinyorwa takaona kuti tingazviita nenzira ipi neipi zvakapoteredza, tichitanga nehupi.
Yakanyanya kunaka spreadsheet, zvingaitwe kubva pane polygon kugadzira tafura neRumbos, Azimuth, Umberi, Azimuth ine chinozivikanwa chigadziko?
Civil 3D kosi yemabasa eruzhinji - Chikamu 2
Magungano, nzvimbo, muchinjikwa zvikamu, cubing. Dzidza kugadzira dhizaini uye yakakosha mitsara inoshanda neAutocad Civil3D software yakashandiswa ku ...
Tinokugamuchirai kunharaunda yeNaviworks, Autodek's yekudyidzana basa chishandiso, rakagadzirirwa manejimendi manejimendi.